ट्रोलको शिकार बनिन् नायिका प्रियंका ! | Kantipath.com
ट्रोलको शिकार बनिन् नायिका प्रियंका !
नायिका प्रियंका चोपडा बलिउड र हलिउडमा उत्तिकै चर्चित छिन । कहिले इन्टरनेटमा सबैभन्दा बढि खोजिएकी नायिका भएर भने कहिले इन्स्टाग्राममा धेरै फलोअर भएको कारण उनि चर्चित भएकी हुन् । ठुलो फ्यानबेस भएकी प्रियंका कहिलेकाहीं ट्रोलको शिकार पनि हुने गरेकी छिन् ।
पछिल्लो समय उनले राम्री देखिन फरक फेशन र मेकअप साथ आएको फोटोलाई विषय बनाउँदा भारतमा उनी ट्रोलको शिकार भइरहेकी छिन् ।
मेट गाला २०१९ कार्यक्रममा प्रियंकाले पृथक फेसनसाथ आफ्नो श्रीमान निक जोनससँग आएकी थिइन् । कार्यक्रममा थिमनै ‘क्याम्पः नोट्स अफ फेशन’ रहेकोले पनि प्रियंका यस्तो नौलो अवतारमा आएकी थिइन् ।
प्रियंकाले लगाएको लुगा मात्र होइन, उनको हेयरस्टाइल र मेकअपको कारण कार्यक्रममा राम्रै चर्चा पाएकी छिन्। यद्यपी उनको तस्विरमा भारतीयहरुले भने भुत जस्तै देखिएको भन्दै मजाक उडाएका छन् ।
भारतीय नागरिक राहुल कुमार गुप्ताले उनको तस्विरलाई साझा गर्दै भने धेरै गाँजा खाँदा यस्तो हुन्छ । त्यस्तै क्यारोलीना नामको ट्वीटर प्रयोगकर्ताले जोकरको फोटो र प्रियंकाको फोटोमा केहि फरक नपाएको लेखेकी छिन् ।
हर्ष यादव नाममा ट्वीटेले उनको फोटो सार्वजनिक गर्दै ‘हाम्री देशी गर्ल दुष्ट आमाको अवतारमा आएकी छिन्’ भनेका छन् । केहिले उनलाई डायन पनि भनेका छन् ।
उनको फेशनमाथी नकारात्मक टिप्पणी गर्नेहरुको संख्या धेरै भएपनि केहिले भने उनको समर्थनमा पनि लेखेका छन् । ‘श्रीमान् साथै हुँदा उनले यस्तो फेशन गरेकी छिन् । श्रीमान्लाई नभएको समस्या तिमीहरुलाई किन ?’ भनेर केहिले प्रश्न पनि गरेका छन् ।
Previous Previous post: हिमाली गन्तव्य लाङटाङ निकुन्ज घुम्ने पर्यटक बढे
Next Next post: आज बुधबार, कस्तो छ तपाईको भाग्य ? हेर्नुहोस् राशिफल
प्रकाश कार्कीको ‘विश्वास’ सार्वजनिक ( भिडियो )